You are here: Home somal Tartankii Dhalinyaradda Cuslaatay 2014
Tartankan oo ay iska kaashadeen Shirkada Telesom iyo Acadamiga Ciyaaraha ee AYD, waxa uu todobaadkiiba laba cisho lagu qaban jiray garoonka 31 may (Garoonka Dhalinta). Waxaana ku tartamayay kooxo ay hormood u ahaayeen dhalin ka kooban dhowr jiil, jillkii ugu horeeyay waxa hormood u ahaa, Fuad cabdilahi cise (Dhabo) maxamed gahayr, Dhiridhaba iyo Axmed Baxnaan Geele (Bacaw). Dhanka kale waxa dhalintii dhexe ka mid ahaa Iyana. Cisman Laba qori, Gaabuush, Kurtin Yasin Abayare, Cali Fagaase. Jiilkii ugu danbeeyay waxa ku jiray dhow aan sidaa u sii badnayn, sababta oo ah Tartanku waxa ahmiyada siinayay dhalintaa hore ee inta badan ciyaaraha ka fadhiisatay.
Tartankan oo ujeedooyinkiisa ay kamid ahayd isdhex galka bulshada iyo in dhalinta danbe ee hada ciyaaraha ku jirtaa ay ku daydaan in aan ciyaaruhu ahayn waxa laga gaboobo.
Hadiii aan u soo noqono ciyaartiii shalay ee finalka ahayd ee ay ku loolamayeen labada kooxood ee kala ah Jigjiga yar iyo Goljano waxay labada kooxoodba soo bandhigeen ciyaaro aad u heersareeya. Labadii qaybood ee ciyaartaba waxay isku mariwayeen 0 iyo 0, oo waxba may kala dhashan.
Kadib waxa loo dhigay laadadka xorta ah kuwaas oo ay guushu ku raacday kooxda Jigjiga yar, halkaasna ku hanatay Koobii dhalinta Cuslaatay, sidaas ayay ku noqotay HORYAALKA DHALINTA CUSLAATAY.